MAXAA HELAY DIIWAAN GELINTII MADANIGA AHAYD? | Saxil News Network
MAXAA HELAY DIIWAAN GELINTII MADANIGA AHAYD?
February 3, 2015 - Written by admin
Xukuumada uu gadhwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxmuud Silaanyo ayaa dalka ka biloowday diwaangalinta madaniga ah 25 September ee sanadkii la soo dhaafay 2014kii.
Xisbiyada Mucaaridka ah ayaa iyagu xukuumada ku Eedayin jirtay mid iyadu mudo kordhin ku daydayaysa Diwaan galinta Madaniga ah,Halka ay xukuumadu iyada wakhtigii ay bilaabaysay diwaan galinta madaniga ah Eedaha Xisbiyada Mucaaridka iskaga difaacaysay in ay ka gaadhsiin doonto inta ay doorasho Gaadhin .
Hadaba Diwaan galinat madaniga ah ayaa iyadu ah mid gaabinaysa isla markaan aan u socon sidii lugu talo galay magaalada Hargeysa oo ah meshii ugu horaysay ee laga bilaabay Diwaangalinta madanig ah ayaa waxa dadwayne badani sugayaan Kaadhadhkoogii,Balse waxa hadhwanaagnews ilo xogogaal oo
u dhuun daloola arinkani u sheegin in ay diwaangalinta ay ka go’en khadkii lugu talo galay in lugu daabaco kaadhkaa Aqoonsiga .
Xukuumada ayaa ilaa imika waxa talaabo ah ka qaadin khadkaa ka go’ay kaadhadhka aqoonsiga mana jiraan waxa talaaboyin ah oo Wasaarada arimaha Gudaha ilaa imika ay bilowday,Dadweyne aad u tiro badan ayaa iyagu u hanqal taagay in mar uu loo yeedho oo ay helaan kaadhkii aqoonsiga ahaa ee ay in badan bacadka u taagnayeen Sidaasina waxa shabkada Hadhwanaagnews u xaqiijiyay ilo xogogaal ah oo iyagu u dhuun daloola Howlaha diwaangalinta madaniga ah .
Isku soo wada duboo arinkan ayaa u eeg mid ay xukuumadu ku doonayso in ay mudo kordhin ku samaysato halka uu wasiirka wasaarada arimaha gudaha somaliland Cali Maxamed Warancade ka gaabiyay kaalintii uu ku lahaa haawsha diwaangalinta .